Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Ny talen'ny MPI teo aloha dia nahatakatra ny hoavin'ny indostria MICE
FACE2FACE Fivoriana mijoro ho an'ny Manapaha matihanina mendrika anao, nefa tsy mandoa vola be.
Ity ny fanambarana nataon'ny Misiona ho an'ny FACE2FACE fihaonana any Las Vegas tarihin'ny mpitarika Jordan D. Clark, ny CEO, ary ny mpiara-miasa.
I Jordan koa no mpikarakara ny faha-25 taona faha-XNUMX n'ny kasaina Fizahan-tany iraisam-pirenena any Las Vegas
Fihaonambe fiarovana sy fiarovana. amin'ny Safertourism Dr. Peter Tarlow. Ity fihaonambe ity dia nomanina tamin'ny volana aprily ary nofoanana noho ny Coronavirus.
I Jordan dia filohan'ny Sales for Harrah's Entertainment tany Las Vegas teo aloha ary voatendry ho an'ny Fihaonana Professionals International (MPI) 2010-2011 Filankevi-pitantanana.
Jordan D. Clark, dia nandray anjara tamin'ny sehatry ny fivoriana nandritra ny 30 taona.
Ny fototry ny orinasanay dia mifototra amin'ny fanatsarana ny fahombiazana amin'ny alàlan'ny fivoriana.
Tsy hoe manaiky fotsiny izy fa ny indostrian'ny fihaonana amin'ny ankapobeny dia ambanin-javatra kely ary matetika tsy raharahina, fa mino koa izy fa ny indostria dia tsy ampy sakafo ho mpanentana ny fanovana sy fitomboana tsara.
Mino izy fa na ny fivoriana anatiny ao anatin'ny fikambanana na ny fivoriana ivelany amin'ny endrika fihaonambe, fivoriambe ary fivarotana dia tena maotera mitondra ny fiaraha-miasa sy ny fahombiazan'ny orinasa. Face2Face Performance Partners dia natsangana hanampiana ireo orinasa sy fikambanana hitombo sy hanatsara ny zava-bita.
I Jordan dia vahiny tao amin'ny eTurboNews seho amin'ny alahady ary niresaka momba ny fanjakan'ny fihaonana sy ny indostrian'ny famporisihana aorian'ny COVID-19.